परिस्थितले जीवनमा ल्याएको नयाँ यात्रा लाई स्वभाविक तर चुनौतीपूर्ण रुपमा लिएकी छु : प्रदेश सभा सदस्य बबिता चौधरी – Shirish News
प्रदेश सभा सदस्य बबिता चौधरी संग गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप ।
जीवनको यात्रा अचानक राजनीतिको दुनियामाा प्रवेश गर्छु भनी सोँच्नुभएको थियो ?
राजनीतिमा मेरो कदम जान्छ भनी भुलवस पनि सोँचेको थिइन । शिक्षाको हिसाबले ‘इन्टरमेडियट सम्मको अध्यन गरेको हुनाले जागिरमा जाने चाहना आवश्य थियो । तर पारिवारीक दायित्वको बोझका कारण एउटा कुशल गृहिणी बन्ने प्रयाशमा जीवनको यात्रा बढ्दै गयो ।
तपाईँलाई प्रदेश सभा सदस्य पदका लागि समानुपातिक सूचीमा नाम राखेको खबरले तपाइँलाई कस्तो अनुभूती भएको थियो ?
मधेश आन्दोलन चल्दै गर्दा उक्त आन्दोलनको औचित्य र अपरिहार्यता बारे चासो जागेको थियो । महिनौ सम्म बजार बन्द र सदरमुकाम जलेश्वरमा बारम्बार राज्य पक्षले आन्दोलनकारीमाथि बलको प्रयोग गर्ने गरेको समाचार सुन्थे । घर परिवारमा लोकतन्त्रको महत्वको चर्चा बारे निरन्तर गफगाफ भइरहन्थ्यो । मधेश आन्दोलनको चर्चा हुनु स्वभाविक नै थियो । नेपालका शासकले मधेशी माथि सयौँ वर्ष देखि बिभेद गरेको भनी बुझिरहेको थिएँ । तर अचानक अफ्नो घरमा ससुरा र जेठो छोरालाई प्रहरी प्रशासनले गोली हानी हत्या गर्यो र मेरो जीवन अचानक अँध्यारो भयो । नेपाली सत्ता कति कठोर र अलोकतान्त्रिक छ भनी बुझ्न मैले इतिहासको अध्यन गर्नु पर्दैन । आफ्नै जीवनमा नेपाली सत्ताको भद्दा प्रस्तुती हेरे ।
तत्कालिन मधेशवादी दल लाई संबिधानसभा बाट बाहिर बस्न बाध्य गराएर संबिधान ल्याइयो । चुनाव लादियो । लोकतन्त्रमा चुनावी सहभागिताको आफ्नै महत्व हुन्छ । र त्यसैबेला तत्कालिन राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (अहिले जसपा) ले मेरो नाम प्रदेश सभा सदस्यको रुपमा अगाडी बढायो । मधेश आन्दोलन कै देन हो प्रदेश नं. २ मा मधेशवादी दल ले सरकार बनाउन सफलता हासिल गर्यो । परिस्थितले जीवनमा ल्याएको नयाँ यात्रा लाई स्वभाविक तर चुनौतीपूर्ण रुपमा लिएकी छु ।
अहिले प्रदेश सभा सदस्य रहेको अवस्थामा तपाइँलाई कस्तो अनुभूती भइरहेको छ ?
अनुभूती कस्तो छ भन्दा पनि धेरै कुरा सिक्ने मौका पाएको छु जस्तो लागिरहेको छ । राजनीति लाई नजिक बाट नियाल्ने मौका मिलेको छ । संघीयताको महत्व र आवश्यकतालाई नजिक बाट बुझ्ने प्रयाश गरिरहेकी छु । कांग्रेस र कम्यिुनिस्टले कसरी मधेशी संग गर्दै आएको विभेदलाई निरन्तरता दिने प्रयाश जारी राखेको छ त्यो महसुस गर्ने मौका प्राप्त भएको छ । विभेदलाई अन्त्य गर्न र समानुपातीक विकाश गर्नको लागि राजनीतिमा इमान्दारिताले लाग्नु महत्वपूर्ण छ भने बुझाईको निकट पुगेकी छु जस्तो लाग्दैछ ।
समानुपातीक विकासको कुरा गर्नुभयो । तपाइँले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको सदुपयोग कसरी गर्दै आइरह्नु भएको छ ?
मैले बुझे अनुसार प्रदेश नं. २ को विकाशको प्रमुख आधार भनेको शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन जस्ता विषयहरु पर्दछन् । मैले प्रदेश सभाको हैसियतमा पाउने विकाश खर्चको रकम स्कूल, अस्पताल र सडकमा अधिकतम लगाउने गरेकी छु । म मेरो योजनाको कडा अनुगमन गर्छु । क्वाइलीटीमा कुनै सम्झौता गर्ने गरिकी छुइन । पोखरी सौन्दर्यकरण र एतिहाषिक मंदिरहरुको जिणर्ोधार गरी आन्तरिक प्रयाटनलाई प्रोतसाहित गर्ने योजनहरु समेत संचालन गर्दै आएकी छु । हामीले पाउँदै आएको बजेट अनुसार इमान्दारीका साथ जनतामूखी योजनाहरु कार्यान्वयण गरीरहेकी छु ।
के तपाइँलाई लाग्छ की आफु मन्त्री हुनपाए जनताका लागि अझ बढी गर्न पाउँथे ? मन्त्री बन्ने रहर छ ?
स्वभाविक हो की प्रदेश सभा सदस्यको तुलनामा एउटा मन्त्रीले बढी काम गर्न पाउँछ । रह्यो मेरे रहरको प्रश्न । नढाँटी भन्ने हो भने आफुले राज्यमन्त्रीको जिम्मा पाएँ भने कुशलताका साथ निर्वाह गर्न सक्छु । केही वर्ष देखिको संसदिय अनुभवले यो आँट सम्म ल्याइदिएको छ ।
सरकार परिवर्तनको हल्ला छ । तपाइँ राज्य मन्त्रीको तयारीमा हुनुहुन्छ ?
सरकार परिवर्त हुन्छ हुँदैन त्यो हाम्रो पार्टीको आदरणीय शिर्ष नेताज्यूहरुको हात मा छ । तर यदी सरकार परिवर्तन भयो वा मन्त्रीमण्डल फेरबदल भयो भने मैले आफ्नो आकांक्षा मेरो हैसियत पुग्ने मेरो आदरणीय नेताज्यूहरुमा निवेदन गरिसकेकी छु । सहिद परिवारबाट एकजनालाई मन्त्री बनाउनुपर्छ भनी विभिन कोणबाट पनि टिप्पणी नभइरहेको होईन । वर्तमान मन्त्रीमण्डलमा केवल एकजना महिला राज्य मन्त्री हुनुहुन्छ । समावेशी हिसाबले पनि मेलेको छैन् । र संसदिय व्यवस्थामा मन्त्रीमण्डल फेरबदल हुनु आवश्यक पनि त मानिन्छ ।
तर अहिले हाम्रो पार्टीको प्रमुख दायित्व भनेको संबिधान जोगाउनु पर्ने रहेछ । राजनीतिमा प्राप्त सैद्धान्तिक उपल्ब्धीलाई समेत केपी शर्मा ओली ले प्रहार गरेका छन् । ओली त्यहीँ नेता हुन जसले मधेश आन्दोलन लाई सक्दो गाली गरेका थिए । मधेशीलाई भारतिय भनि गिज्याउनु उनको धर्म त थियो नै, मधेशी जनता सहिद हुँदा रुखबाट आँप झरेको भनी संज्ञा दिने ओलीको लागि नेपालमा गणतन्त्र ल्याउनु भनेको बैल गाडामा चढेर अमेरिका जानु सरह थियो । अतः अहिले हाम्रो सम्पूर्ण उर्जा भनेको ब्यवस्था बचाउनमा केन्द्रित हुनुपर्छ र छ पनि ।